ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု - Lin High Power (LHP) Services
15th June 2018 admin.jess
LIN HIGH POWER Education Services မှ THE UK နှင့် EUROPE (၂၆ နိုင်ငံလုံး) တွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြား လိုသူများ အတွက် မြန်မာပြည်တွင် ပထမဆုံး ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျှက် ရှိပါသည်။
မေဂျာ ကျောင်း နှင့် နိုင်ငံများကိုရွေးချယ်ပေးခြင်း
Education Consultant နှင့် တစ်ယောက်ခြင်း ဆွေးနွေးလိုသူများအတွက်
တစ်နာရီ – ၅၀၀၀၀ ကျပ်
Online, Facebook, Skype, Viber မှ Voice/video call ဖြင့်
ဆွေးနွေး လိုသူများအတွက် တစ်နာရီ -၂၅၀၀၀ ကျပ်
တစ်လ နှစ်ခါ စနေ နေ့တိုင်း တွင် ပြုလုပ်သော Event အတွက် ၁၅၀၀၀ ကျပ်
Event တစ်ခု တွင် လူဦးရေ ၁၀ ဦးမှ ၂၀ ဦးအထိ ကန့်သတ်ထားပါသည်။
ကျောင်းတက်ဖို့ လာရောက် ဆွေးနွေးရန် အတွက် ဆွေးနွေးခ ဘာလို့ပေးဆောင်ရတာပါလဲ?
UK, USA, Australia နှင့် Singapore ရှိကျောင်းများသို့ လျှောက်ထား လို၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက…
LIN HIGH POWER နှင့် official agent အဖြစ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော ကျောင်းများအတွက် စုံစမ်းခြင်း၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း၊ ကျောင်းလျှောက်ခြင်း၊ ဗီဇာ နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးအတွက် မည်သည့် ၀န်ဆောင်ခမပးရန် မလိုအပ်ပါ။
Official agent အဖြစ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသောကျောင်းများမှcommission fee အဖြစ်ကျောင်းလခ၏25% အထိ ပြန်လည်ရရှိသောကြောင့် LIN HIGH POWER မှ လာရောက်ဆွေးနွေးခြင်း စုံစမ်းခြင်း မေဂျာရွေးချယ်မှုများတွက်အကြံပေး ဆွေးနွေးပေးခြင်း ကျောင်းလျှောက်ခြင်းများအတွက် အခမဲ့ ၀န်ဆောင်ဖြစ်သည်။
သို့သော် UK, USA, Australia နှင့် Singapore ရှိ LIN HIGH POWER နှင့် official agent အဖြစ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသည့် ကျောင်းများအတွက် မဟုတ်ဘဲ၊ ကျောင်းသားစိတ်ကြိုက် ကျောင်းများအတွက်စုံစမ်းခြင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လိုပါက အတိုင်ပင်ခံအကြံပေးခြင်းအတွက် ၀န်ဆောင်ခပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
Europe ရှိကျောင်းများအတွက် စုံစမ်းလိုသောကျောင်းသားများ အတွက်လည်း စုံစမ်းခြင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများအတွက် ၀န်ဆောင်ခပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ Europe ရှိ ကျောင်းများသည် LIN HIGH POWER နှင့် official agent ချုပ်ဆိုထားသည့်တိုင် ကျောင်းစရိတ်အလွန်နည်းပါးသဖြင့် LIN HIGH POWER မှ commission fee အဖြစ် မြန်မာငွေသောင်းဂဏန်းခန့်သာ ပြန်ရသဖြင့် ၀န်ဆောင်ခပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျောင်းကိစ္စလာရောက်ဆွေးနွေးရန်အတွက် စုံစမ်းရာမှာ ဘာလို့ BOOKING တင်ပြီးမှ လာရတာပါလဲ?
နိုင်ငံခြားသို့သွားရောက် ပညာသင်ကြားမည့်သူအားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ် သို့ စရောက်ချိန် မှစ၍ registration ကိစ္စများ ၊ visa ကိစ္စများမှအစ ဆရာ ဆရာမများကို စာသွားမေးလိုသည်ကိစ္စများ အပါအ၀င် မည်သည့်ကိစ္စမဆို ကြိုတင် အကြောင်းကြား ပြီးမှ သွားရောက်ရပါသည်။
သို့ပါသောကြောင့် LIN HIGH POWER Services များကိုလည်း Booking စနစ်ဖြင့် သာ စီစဉ်ထားပါသည်။
LIN HIGH POWER Education services မှ Europe ၂၆ နိုင်ငံလုံးတွင် ကျောင်းလခ လုံးဝ မပေးရသော ကျောင်းမှစပြီး တစ်နှစ်စာကျောင်းစရိတ် သိန်း၁၀၀အတွင်းရှိကျောင်း များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင် မှုပေးလျှက်ရှိသည့်အပြင်ကျောင်းသာလျောက်လိုသည့် မည့်သည့်နိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်များကိုမဆိုလျောက်ထား ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
LIN HIGH POWER Education Services မှ အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို ၀န်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။
UK နှင့် EU တွင်တက်ရောက်လိုသည့် မည်သည့်နိုင်ငံမှ တက္ကလိုလ်များမဆိုစုံစမ်းပေးခြင်း
ကျောင်းသားတက်ရောက်လိုသည့် မည်သည့်ကျောင်းများကို မဆိုလျှောက်ထား စုံစမ်းပေးခြင်း
ကျောင်းဝင်ခွင့်, မေဂျာအသုံးဝင်ပုံများ ရှင်းပြပေးခြင်း အကြံပြုခြင်း
ကျောင်းပြီးခါစ လူငယ်များအတွက် မေဂျာရွေးချယ်နိုင်ရန် အကြံအဥာဏ်များပေးခြင်း
မေဂျာပြောင်းပြီး ကျောင်းဆက်တက်လိုသူများ ကျောင်းပြောင်းလိုသူများအတွက် ဆွေးနွေးပေးခြင်း
ကျောင်းသား/သူ ဗီဇာ နှင့် မိသားစုဝင် ဗီဇာများ အတွက် ရှင်းပြပေးခြင်း
ကျောင်းစရိတ် နေထိုင်စရိတ် နှင့် ဗီဇာ ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးပေးခြင်း
ကျောင်းပြီး သည့်နောက် ဗီဇာနှင့် အလုပ်ကိစ္စများကိုဆွေးနွေးပေးခြင်း
Scholarship အတွက်အကြံပေးခြင်း လျှောက်ထားပေးခြင်း
ကျောင်းလျှောက်ရန် motivation letterများ CVများ cover letterများ
assignments, thesis, research papers များကို စစ်ဆေး ပြင်ဆင်ပေးခြင်းကိုလည်း ၀န်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။
UK & EU ရှိ ၀န်ထမ်းများ *လက်ရှိ UK & EUတွင် နေထိုင် ကျောင်းတက်ခဲ့သောကြောင့် အသေးစိပ်တိကျစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပြီး
အကောင်းဆုံး အကြံအဥာဏ်များ နှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိကြောင်းအာမခံပါသည်။
– New Zealand တို့ ပဲဖြစ်ပါသည်။
– Visa counselling services များ
– ကျောင်းသားဗီဇာ ကိစ္စများ
– ကျောင်းသား/သူ ဗီဇာ နှင့် မိသားစုဝင်များအတွက်
– ကျောင်းစရိတ် နေထိုင်စရိတ် နှင့် ဗီဇာ ကိစ္စများ
– မိသားစု ခေါ် လာလိုသူများအတွက်ဆွးနွေးခြင်းများ ကိုလည်း ၀န်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။
UK တွင် ပညာသင်ကြား လိုသူများ အတွက်
ကျောင်းစရိတ် နှင့် Ranking သတ်မှတ်ပုံ
The UK တစ်ခုလုံးတွင် တက္ကသိုလ်များ ကျောင်းပေါင်း ၁၃၀ ကျော်ရှိသည်။
ကျောင်းများ၏ Ranking များ ကို ကျောင်းရှိ Accessories များ နှင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည့် အပြင် အခြား များစွာသော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သတ်မှတ် ခွဲခြားခြင်း ဖြစ်ပြီး UK တွင် ရှိသော မည်သည့် တက္ကသိုလ် မဆို ပညာ သင်ကြား ပုံစနစ်သည် အားလုံး အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ကျောင်းစရိတ် ခန့်မှန်းခြေများ မှာ
– Ranking အရမ်းကောင်းသော တက္ကသိုလ်များကို တက်ရောက်လိုပါက
တစ်နှစ်စာ ကျောင်းစရိတ် စတာလင်ပေါင်ငွေ ၁၇၀၀၀ မှ စတင်ပြီး မေဂျာ အလိုက် ဈေးအမျိုးအမျိုး ဖြင့် တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်သည်။
– Medium Ranking တက္ကသိုလ်များကို တက်ရောက်လိုပါက
တစ်နှစ်စာ ကျောင်းစရိတ် စတာလင် ပေါင်ငွေ ၁၃၀၀၀ မှ စတင်ရ်ျ ရှိသည်။
– အတော်အသင့် တက္ကသိုလ်များကို တက်ရောက်လိုပါက
တစ်နှစ်စာကျောင်းစရိတ် စတာလင်ပေါင်ငွေ ၁၀၀၀၀ မှ စတင်ရ်ျ ရှိသည်။
– ကျောင်းလခများသည် တက်ရောက် သင်ကြား လိုသည့် မေဂျာများ ပေါ်မူတည်ရ်ျ ကျောင်းစရိတ်များမတူပါ။
– စတာလင် တစ်ပေါင် – မြန်မာကျပ်ငွေ (ခန့်မှန်း) ၂၂၀၀ ကျပ်
အိမ်ခန်းခ နှင့် စားသောက်စရိတ် ခန့်မှန်းခြေများ
– London နှင့် အနီးတစ်ဝိုက် အတွက် အိမ်ငှားစရိတ် တစ်လ £1000 အနည်းဆုံးမှ စရ်ျ ဈေးအမျိုး အမျိုး ရှိသည်။
– မန်ချက်စတာ လစ်ဗာပူ နယူကာဆယ် စသည်ဖြင့် အိမ်ငှားတစ်ရိတ် တစ်လ £400 အနည်းဆုံးမှ စတင်ရ်ျ
– စကော့တစ်လန် ဝေလ် အိုင်လန် တစ်ဝိုက်အိမ်ငှားတစ်ရိတ် တစ်လ တစ်လ £300 အနည်းဆုံးဈေးဖြင့် ငှားရမ်းနိုင်သည်။
အိမ်တွင် ချက်စားသူများအတွက် စားစရိတ်သက်သာနိုင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျငွေ တစ်လ အနည်းဆုံး £ 350 ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သွားရောက်ပညာသင်လိုသည့် နိုင်ငံ တက္ကသိုလ် နှင့် မေဂျာများကိုရွေးချယ်ပြီးသည့်နောက်
UK သို့ ကျောင်းလျှောက်လိုသူများသည် LHP နှင့် official agent ချုပ်ဆိုထားသော ကျောင်းများကို တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပါက Service fees & consultant feesများ ကို လုံးဝ ပေးရန် မလိုအပ်ပါ။
သို့သော် ကျောင်းသား စိတ်ကြိုက်ကျောင်းများကို လျှောက်ထားလိုပါက ၀န်ဆောင်ခပေးရန် နှင့် အကြံပေးခပေးရန် လိုအပ်သည်။
EU တွင် ပညာသင်ကြား လိုသူများ အတွက်
အိမ်ခန်းခ နှင့် စားသောက်စရိတ် ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းခြေများ
Student accommodation ကျောင်းဆောင်များ – တစ်လ 350-700€
Share flat- တစ်လ 400€-900€
Own flat – 700€-1500€
အိမ်မှာချက်စားနိုင်သူများအတွက်တော့ တစ်လ € 300
EU ရှိ ကျောင်းများသို့ လျှောက်ထားချိန်တွင်ကျောင်းများကို LHP မှ official agent အဖြစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော်လည်း ကျောင်းစရိတ်မှာ0EU မှ 6000 EU အထိသာရှိသည်။
LHP မှ commission fees 15% ရတယ်ဆိုပါက မြန်မာ ငွေ သောင်းဂဏန်းသာပြန်ရရ်ျ * free services ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှု ပေးရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် Service fees & consultant feesများပေးရန် လိုအပ်သည်။
UK & EU တွင် ကျောင်းတက်ရန် အတွက် လိုအပ်ချက်များ
UK နှင့် EUROPE တွင် ကျောင်းစရိတ် အပြင် ထပ်မံကုန်ကျမည့်စရိတ် ခန့်မှန်းခြေများ
– ကျောင်းလခ တစ်နှစ်စာသီးသန့်
နိုင်ငံ တက္ကသိုလ် မေဂျာ အလိုက် ကျောင်းစရိတ်များ မတူပါ
– ကျောင်းဖောင်ကြေး နှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေး
(Visa reject ထိပါက ပြန်မရပါ)
– သွားရောက်ပညာသင်ကြားမည့် နိုင်ငံဧ။်သံရုံး မြန်မာပြည်တွင်မရှိပါက ဘန်ကောက်သို့သွားရောက်လျှောက်ရန် လိုအပ်သည်။
Air ticket – YGN to BKK round ticket 120$
– လေယာဉ်လက်မှတ် ရန်ကုန် မှ ပညာသင်သွားမည့် နိုင်ငံသို့
1000 USD -1500 USD (အသွားလက်မှတ်တစ်ခုတည်းအတွက်သာ)
– Visa fees 72$ – 450$ (for EU & UK only) သွားရောက်ပညာသင်ကြားမယ့် နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပါသည်။
– ကျန်းမာရေး အာမခံ Insurance 400$ Insurance တွေက လျှောက်မယ့်နိုင်ငံပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဈေးကွာသည်။
– ဆေးရုံတွင် ဆေးစစ်ရန် 300$
– အိမ်လခ Deposit နှင့် တစ်လစာ
– မြန်မာဘာသာဖြင့်အောင်လက်မှတ်များ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ဘာသာပြန် နိုတြီပြန်ရန်
တစ်ရွက် 5000 KS or 20000 KS
– ဘာသာပြန်ပြီးစာရွက်များအား Legalisation ကို သံရုံးတွင်လုပ်ရန်
စာရွက် တစ်ရွက် 20 EU
– LHP services fees (Visa reject ထိပါက ပြန်မရပါ)
အထက်ပါ ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် တစ်စုံ တစ်ရာ မကျေလည်မှုများရှိပါက လျှောက်ထားသော ကျောင်းများသို့ ကျသင့်ငွေများကို လျှောက်ထားသူ ကျောင်းသား/သူများမှ ကိုယ်တိုင် စုံစမ်းမေးမြန်နိုင်သည်။
Bachelor တက်ရောက်ရန် အတွက် လိုအပ်ချက်များ
• CV From ( LHP တွင် Sample တောင်းယူပါရန်)
• Personal Resume ( LHP တွင် Sample တောင်းယူပါရန်)
• Motivation Letter ( LHP တွင် Sample တောင်းယူပါရန်)
• ဆယ်တန်းအောင်လက်မှတ်မူရင်း + မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
• ဆယ်တန်းအမှတ်စရင်း မူရင်း+ မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
• ကျောင်းမှဆရာနှစ်ဦးထံမှ ပညာအရည်အချင်းထောက်ခံစာ အင်္ဂလိပ်လို နှစ်စောင်
• အလုပ်လုပ်ထား တာရှိရင် အလုပ်ရှင်ထံမှ အလုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ထောက်ခံစာ
• IELTS အမှတ်6– 7.5 ကြား မူရင်း (* ကိုယ်ယူမယ့် ဘာသာပေါ်မူတည်ပြီး IS အမှတ်လိုအပ်ချက်ကွာပါသည်)
• အိမ်ထောင်စုစရင်း မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
• မှတ်ပုံတင် မူရင်း+ မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
• ပတ်စပို့ ၁ နှစ်သက်တမ်းရှိ စာအုပ်မူရင်း + မိတ္တူ
• တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/သူ ဧ။်ပိုင်ဆိုင်မှုများ နိုကြီမူရင်း
*ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါက မိဘပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများ မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
• ဘဏ်စရင်းအတွက် ဘဏ်မှ မန်နေဂျာ ထောက်ခံချက် မူရင်း
ဘဏ်စရင်းထဲတွင် ငွေများမှာ ဗီဇာမ၀င်ခင် ၄၅ရက်အထက် ၀င်နှင့်ပြီးဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး
ကျောင်းဝင်ခွင့် ရပြီးမှ တက်ရောက်လိုသည့် တက္ကသိုလ်များမှ ငွေအမောင့် ဘယ်လောက်ရှိရမည်ကို ပြန်ပြောလာပါသည်
(*ပိုင်ဆိုင်မှုများမရှိသေးပါက မိဘပိုင်ဆိုင်မှုများ ဘဏ်စာအုပ်ဖြင့်ပြနိုင်သည်)
Master တက်ရောက်ရန် အတွက် လိုအပ်ချက်များ
• ဆယ်တန်းအောင်လက်မှတ်မူရင်း+ မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
• Bachelor အောင်လက်မှတ်မူရင်း+ မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
• Bachelor အမှတ်စရင် မူရင်း+ မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
• ကျောင်းမှဆရာနှစ်ဦးထံမှ ပညာအရည်အချင်းထောက်ခံစာ အင်္ဂလိပ်လို နှစ်စောင်မူရင်း
• အလုပ်လုပ် ထားတာရှိရင် အလုပ်ရှင်ထံမှ အလုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ထောက်ခံစာမူရင်း
• IELTS အမှတ်6– 7.5 ကြား မူရင်း
(* ကိုယ်ယူမယ့် ဘာသာပေါ်မူတည်ပြီး IS အမှတ်လိုအပ်ချက်ကွာပါသည်)
• တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/သူ ဧ။်ပိုင်ဆိုင်မှုများ
ကျောင်းဝင်ခွင့်ရပြီးချိန်တွင် တက္ကသိုလ်များမှ ငွေအမောင့် ဘယ် လာက် ရှိရမည် ကို ပြန်ပြောလာပါသည်
PhD တက်ရောက်ရန် အတွက် လိုအပ်ချက်များ
• Bachelor, Master အောင်လက်မှတ်မူရင်း+ မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
• Bachelor, Master အမှတ်စရင် မူရင်း+ မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
• ကျောင်းမှ ဆရာနှစ်ဦးထံမှ ပညာအရည်အချင်းထောက်ခံစာ နှစ်စောင်မူရင်း
• အလုပ်လုပ်ထား တာရှိရင် အလုပ်ရှင်ထံမှ အလုပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ထောက်ခံစာမူရင်း
• တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/သူ ဧ။်ပိုင်ဆိုင်မှုများ *ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါက မိဘပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများ မိတ္တူ + နိုကြီမူရင်း
Europe ရှိ နိုင်ငံ အလိုက် တက္ကသိုလ်များ
Europe တွင်းရှိ ranking 1-200 တွင်း ရှိသော တက္ကသိုလ်များ
UK တွင်းရှိ ranking 1-200 တွင်း ရှိသော တက္ကသိုလ်များ
Europe အတွင်း ဈေးသက်သော တက္ကသိုလ်များ
Belgium ရှိ တက္ကသိုလ်များ
78 1 Catholic University of Leuven Belgium Leuven 600 USD 1,500 USD
962Ghent University Belgium Gent 1,085 USD 1,305 USD
1453Catholic University of Louvain Belgium Louvain-la-Neuve 4,554 USD 4,554 USD
1994Vrije Universiteit Brussel Belgium Brussels 1,591 USD 1,591 USD
2325University of Liege Belgium Liege 4,581 USD 4,581 USD
2506University of Antwerp Belgium Antwerpen 7,133 USD 7,681 USD
3397Université Libre de Bruxelles Belgium Brussels 4,581 USD 4,581 USD
1455 8 Institute of Tropical Medicine Antwerp Belgium Antwerpen 2,194 USD 13,168 USD
14899University of Mons Belgium Mons 402 USD 548 USD
1891 10 University of Namur Belgium Namur 916 USD 916 USD
2084 11 PXL University College Belgium Hasselt 768 USD 768 USD
2215 12 Ghent University College Belgium Gent 987 USD 987 USD
3081 13 Vlerick Leuven Gent Management School Belgium Gent
3212 14 Catholic School of Limburg Belgium Limbourg 658 USD 658 USD
3859 15 Hasselt University Belgium Hasselt 2,500 USD 2,500 USD
3907 16 University College of West Flanders Belgium Brugge 636 USD 636 USD
4405 17 Artesis Plantijn University College Belgium Antwerpen 987 USD 1,097 USD
4548 18 Royal Military Academy of Brussels Belgium Brussels
5037 19 Centre for European Policy Studies Belgium
5741 20 Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (Ex-Lemmens) Belgium 7,500 USD 7,500 USD
5771 21 Léonard de Vinci University College Belgium Brussels 713 USD 768 USD
5793 22 Catholic School of Leuven Belgium Leuven 768 USD
5928 23 College of Europe Bruges Belgium
5937 24 Vesalius College Brussels Belgium Brussels 15,000 USD 15,000 USD
5998 25 Facultés Universitaires Saint Louis Bruxelles Belgium Brussels
6085 26 Thomas More Hogeschool Belgium Mechelen 658 USD 1,097 USD
6702 27 Karel de Grote University College Belgium Antwerpen 658 USD 768 USD
6953 28 École de recherche graphique Belgium Brussels 925 USD 925 USD
6971 29 Saint-Louis University, Brussels Belgium Brussels 548 USD 548 USD
7063 30 Artevelde Hogeschool Belgium Gent
7400 31 Groep T University College Belgium Leuven 658 USD 768 USD
7795 32 Haute École Louvain en Hainaut (HECE+HELHO+HERB) Belgium Mons 5,000 USD 5,000 USD
7874 33 Institute for European Studies Brussels Belgium
8100 34 Catholic University of Leuven Kulak Belgium
8459 35 Erasmus School of Brussels Belgium Brussels 7,500 USD 7,500 USD
9077 36 Haute École Libre Mosane Isell Belgium Liege 2,500 USD 2,500 USD
9334 37 Inter University Institute for High Energies ULB VUB Belgium
9383 38 Antwerp Maritime Academy Belgium Antwerpen 7,500 USD 7,500 USD
9529 39 VIVES University College Belgium Kortrijk 1,000 USD 1,000 USD
9597 40 XIOS Hogeschool Limburg Belgium
9631 41 University of Antwerp Management School Belgium
9947 42 Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication Belgium
10100 43 Hogeschool-Universiteit Brussel Belgium Brussels 670 USD 1,097 USD
10269 44 Campus Sint-Lukas Brussel LUCA School of Arts Belgium Brussels 1,000 USD 1,000 USD
10700 45 Académie Universitaire Louvain Belgium
10891 46 Haute École Provinciale de Hainaut CONDORCET Belgium Tournai
10929 47 United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies Belgium
10930 48 École Pratique Hautes Études Commerciales Belgium Brussels
10982 49 INSAS Belgium Brussels 219 USD 548 USD
11476 50 Haute École de Namur-Liège-Luxembourg Belgium Seraing 1,000 USD 1,000 USD
11538 51 Koninklijk Conservatorium Brussel en Bibliotheek Belgium Brussels
11630 52 Haute École Albert Jacquard Namur Belgium Namur
11837 53 Haute École de Bruxelles Belgium Brussels
11846 54 Haute École ICHEC Belgium Brussels
11855 55 Haute École Lucia de Brouckère Belgium Brussels
11856 56 Royal Conservatory of Brussels Belgium Brussels 916 USD 916 USD
11915 57 Royal Academy of Fine Arts Artesis Hogeschool Antwerpen Fashion Department Belgium
12755 58 Flanders Higher Institute for Fine Arts Belgium
13050 59 Haute École Robert Schuman Belgium Saint-Hubert
13087 60 Institute of Music and Pedagogy Belgium Namur 548 USD 877 USD
13103 61 Institute of Saint-Luc in Liège Belgium Liege 932 USD 932 USD
13197 62 Haute École en Hainaut Belgium Mons
13291 63 Haute École Francisco Ferrer Belgium Brussels 2,500 USD 2,500 USD
13432 64 Institute of Arts of Diffusion Belgium Louvain-la-Neuve 1,316 USD 2,194 USD
13478 65 Haute École Charlemagne Belgium Liege
14068 66 Haute École Paul Henri Spaak Belgium Brussels
14191 67 TechnocITé Belgium
14282 68 Haute École Galilee Belgium Brussels
14302 69 Chapelle Musicale Reine Elisabeth Belgium
14932 70 Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine Belgium Brussels 2,500 USD 2,500 USD
15012 71 Evangelische Theologische Faculteit Leuven Belgium Leuven 2,500 USD 2,500 USD
15089 72 Orpheus Instituut Belgium Gent
15477 73 Haute École de la Ville de Liège Belgium Liege
15897 74 Continental Theological Seminary Belgium
15916 75 United Business Institutes of Brussels Belgium
16052 76 Université Libre de Bruxelles Faculté d’architecture de l’ULB (Institut Supérieur d’Architecture La Cambre) Belgium
17095 77 École Supérieure des Arts Plastiques et Visuels Belgium
18304 78 Limburg Transnational University Belgium 2,500 USD 2,500 USD
19065 79 Saint Luc Enseignement Artistique Belgium
19345 80 Académie Universitaire Wallonie Europe Belgium
19511 81 Institute of Saint-Luc in Brussels Belgium Brussels 932 USD 932 USD
21835 82 Institute of Saint-Luc in Tournai Belgium Tournai 548 USD 548 USD
23512 83 Université Libre des Sciences de L’Entreprise et des Technologies de Bruxelles Belgium
UK & EU တွင် ကျောင်းတက်ရန် အတွက် ဗဟုသုတများ
Schengen ဧရိယာ အတွင်းရှိ နိုင်ငံများ
Europe နိုင်ငံ များ နှင့် ဘာသာ စကား များ
The UK နှင့် USA ပညာရေး ကွာခြားချက်
World ranking 1-200 တွင်း ရှိသော တက္ကသိုလ်များ
နိုင်ငံခြားတွင်ရှိသော မြန်မာ သံရုံး လိပ်စာများ
E-mail : mynembdk@dhaka.net
E-mail : myanmar@brunet.bn
E-mail : mebrasilia@gmail.com
E-mail : embassymyanmar@access.com.eg
E-mail : myanmar@zahav.net.il
E-mail : merome2010@gmail.com
E-mail : mevlao@laotel.com
E-mail : myanila@mydestiny.net, manila@mydestiny.net
E-mail : mofa.aung@mptmail.net.mm
E-mail : ambassador@mesingapore.org.sg
E-mail : mmembcmb@sltnet.lk
E-mail : melondon@btconnect.com
မြန်မာပြည်တွင်း ရှိ နိုင်ငံခြား သံရုံး လိပ်စာများ
E-mail : austembassy.yangon@dfat.gov.au, austembassy.rangoon@dfat.gov.au
E-mail : myangon.myanmar@mfa.gov.bn
E-mail : brasemb.yangon@itamaraty.gov.br
E-mail : post@botschaftrangun.net.mm
E-mail : indiaembassy@mptmail.net.mm
E-mail : kbriygn@indonesia.com.mm
E-mail : info@yangon.mfa.gov.il
E-mail : ambyang.mail@esteri.it
E-mail : info.cul@yn.mofa.go.jp, eco@yn.mofa.go.jp, ryoji@yn.mofa.go.jp,
E-mail : myanmar@mofat.go.kr, hankuk@koremby.net.mm
E-mail : laoembcab@mptmail.net.mm
E-mail : malyangon@kln.gov.my
E-mail : nepemb@mptmail.net.mm
E-mail : emb.office.yangon@mfa.no
E-mail : pakistan@myanmar.com.mm
E-mail : yangon.pe@dfa.gov.ph, p.e.yangon@gmail.com
E-mail : rusinmyan@mptmail.net.mm, rusinmyan@yandex.ru
E-mail : serbemb@yangon.net.mm
E-mail : srilankaemb@myanmar.com.mm
E-mail : smtmhr@myanmar.com.mm, smtmhr@mptmail.net.mm
E-mail : yan.vertretung@eda.admin.ch
E-mail : thaiygn@mfa.go.th
E-mail : visa.rangoon@fco.gov.uk
E-mail : vnembmyr@cybertech.net.mm